Ekpere nye Saint Ignatius nke Loyola. ? Ịchụpụ ndị mmadụ na ndị iro
Ekpere Saint Ignatius nke Loyola Ọ dị ike nke ukwuu ebe ọ bụ na ọ nọ n'ụwa a, ihe kacha mkpa maka ya bụ ikwere na inyere ndị ọzọ aka mgbe niile.
Ọ bụ nke a mere o jiri nweta nnukwu ihe ma e wezụga ịbụ onye ji obi ya niile kwenye n'okwu Chineke ma na-akụzi nkụzi Ndị Kraịst. Obu okwukwe ahu siri ike nke diri ihe nyeere ya aka rue oge iku ume ya ime uche Jehova.
Ugbu a, onye ụka Katọlik bụ onye senti ma onye ukwu, n'ihi nnukwu ọrụ ebube ọ nọ na-enye ọbụladị mgbe ọ hapụrụ ala a.
Ohu nke okwu okike Chukwu onye n’agba mbọ taa inyere anyị aka pụọ ​​n'ọnọdụ ọjọọ.
Na agbanyeghị mkpa anyị na-agabiga, n’ezie San Ignacio de Loyola nwere enyemaka n’aka ya iji nye anyị ya.
1 Ekpere Saint Ignatius nke Loyola Onye obu?
1.1 Ekpere nke Saint Ignatius nke Loyola iji kewapụ ndị mmadụ
1.2 Ekpere Saint Ignatius nke Loyola megide ndi iro
1.3 Ekpere nke nchebe
1.4 Imechi ndi agbata obi ojo
Ekpere Saint Ignatius nke Loyola Onye obu?
Akụkọ ihe mere eme na-agwa anyị na a mụrụ Ignacio de Loyola na 1491. Ọ malitere ọrụ agha dịka omenala ezinụlọ ya si dị. Agbanyeghị, ọ merụrụ mmerụ ahụ nke gbochiri ya ịga n'ihu n'ọmụmụ agha ya na n'ụzọ dị otu a ọ malitere ịbụ onye kwere ekwe kwesịrị ntụkwasị obi na okwukwe Ndị Kraịst.
Amalitere ime ụfọdụ agbahapụ nke mmụọ na o kpebiri itinyekwu mgbatị ahụ na ọzụzụ ahụ ma ọ bụ mgbe ahụ ka ọ malitere ịkatọ ndị ọzọ na-agbaso otu usoro ọzụzụ. Mgbe ọtụtụ usoro ọ gafere, ọ malitere na Companylọ ọrụ Jesus nke bu aru di elu taa na-arụ ọrụ n'ime ihe niile ụwa.
Ọ nwụrụ n’ime Rome N'afọ 1556, a pịara ya ihe n'afọ 1609 wee mezie ya na 1922. Enyere ya ya na July 31 ka o mee ememe ncheta ọmụmụ ya wee na-echeta ụwa niile.
Ekpere nke Saint Ignatius nke Loyola iji kewapụ ndị mmadụ
Oh! Nwanyị kachasị nsọ, nne dị elu na nke eluigwe, onye sitere n'ike mmụọ nsọ nne gị Saint Ignatius nke Loyola, ịgbaso ụzọ ọrụ ndị nchụ aja, ịrara ndụ ya nye ọnọdụ ime mmụọ ya iji jee ozi, dị ka ọrụ na ihe atụ, nye mmadụ , M na-arịọ gị, jiri obi umeala, gbaghara mmejọ m ma kwe ka m, site na nnukwu ofufe m na-ekwupụta gị, na Saint Ignatius nke Loyola na-echebe m, na ike nke okwukwe, na-ewepụ ndị mmadụ na gburugburu ebe obibi m naanị ndị chọrọ iwetara m nsogbu, ana m arịọ gị ka ịchebe ha n'akụkụ m ma mee ka ha mata na ọ kaara ha mma ime ihe ọma. Amen.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchụpụ ndị mmadụ, nke a bụ ekpere ziri ezi nke Saint Ignatius nke Loyola.
N'aga San Ignacio de Loyola gafere ọtụtụ mkpagbu n'ihi okwukwe ya, ọ ghọrọ onye mgbapụrụ.
Onye siri ike, onye na - alụ ọgụ na, rue taa, ihe atụ nke ịdị nsọ n'agbanyeghị ọtụtụ ọnọdụ. Ọ pụrụ inyere anyị aka iguzosi ike n'ọnọdụ ndị tara akpụ.
Ọ bụ iji chụpụ ndị na-akpasu iwe, ike ọjọọ, ọnọdụ ọjọọ ma ọ bụ ihe ọ bụla nke na-ezu udo anyị.
Naanị ị ga - ekwenye na ya nwere ike ịkwado maka anyị n'ihu nna nke eluigwe, yabụ na ọnọdụ ma ọ bụ onye ahụ ga-ewepụ ndụ anyị kpamkpam.
Ekpere Saint Ignatius nke Loyola megide ndi iro
Kacha Nsọ Nna Saint Ignatius nke Loyola, onye guzobere Society of Jesus; ahọpụtara n’ime puku kwuru puku iji gbasaa ebube Chineke n’akụkụ anọ nke ụwa; nwoke a ma ama n'ụdị omume ọma niile ...
Ma karisia na idi ocha nke ebumnuche nke i choro mgbe nile maka otuto di uku nke Chineke; onye ama ama nke ncheghari, obi umeala na ezi uche; enweghị ike ịgbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe mgbe niile, onye kachasị ewepụtara onwe ya, onye na-emezu ihe pụrụ iche; nke kachasị ọrụ ebere kacha mma n'ebe Chineke nọ, kacha nwee okwukwe na olileanya siri ike ...
Ana m a rejoiceụrị ọ ,ụ, Nna m hụrụ n'anya, ịhụ ka ị jupụtara n'ọtụtụ ihe ịtụnanya dị ukwuu, ma arịọ m gị ka ị nweta ụmụ gị mmụọ mmụọ ahụ gbara gị ume, nyekwa m ebumnuche ziri ezi dị otú a, na, n'ihe ntakịrị, ana m achọ nsọpụrụ Chineke kpamkpam. na-e ofomi nke gị, sitekwa otu a m jisiri ike bụrụ onye gị na otuto.
Kpee ekpere nke Saint Ignatius nke Loyola megide ndi iro nke nwere okwukwe di uku.
Ndị iro ahụ dịrị site na mmalite nke okike ma San Ignacio de Loyola nwere ha ma pụta na-emeri ọnọdụ niile ọ gabigara, ọ dịghị nke dị mfe.
Nke a mere m jiri juo ya ajuju megide ndi iro Saint Ignatius nke Loyola nwere ike inyere anyị aka idozi ọtụtụ ọnọdụ nwere ike isi ike imeri mmadụ.
Ekpere ejiri okwukwe mee siri ike ma mgbe ebumnuche dị mma ma ekpere wee dị ka mkpu sitere na mkpụrụ obi ahụ dị mkpa enweghị ihe a ga-ewetara anyị.
Ekpere nke nchebe
Saint Ignatius nke Ebube nke Loyola, onye hibere Society nke Jisos na onye oka iwu na onye nchedo nkem!
Ebe ọ bụ na ị dị elu n’eluigwe n’ihi na ị rụọla ọrụ gị iji weta ebube na otuto dị ukwuu nke Chineke, ịlụso ndị iro nke Chọọchị ọgụ, ịgbachitere okwukwe anyị dị nsọ, gbasaa ya site na ụmụ gị n’ụwa nile ...
Nweta nsorom nke Chineke, maka amara nke Jisos Kraist, na aririọ nke nne m dị ebube, mgbaghara nke mmehie m niile, nyere m aka hụ Chineke n’anya ma jeere ya ozi na mgbali ọ bụla site ugbu a gaa n’ihu na nguzosi ike n’ụzọ nke omume, na ọ joyụ nke ịnwụ na ọbụbụenyi ya na amara, ịhụ ya, ịhụ ya n'anya, ịnụ ụtọ ya na ito ya na ụlọ ọrụ gị kemgbe narị afọ niile.
San nwere mmasị n'ekpere nchebe nke San Ignacio de Loyola?
Ọ maara otu esi edebe ma chebe okwukwe na nkwenkwe ya n'oge kachasị njọ na nke a na - eme ya onye nchekwa ụka nke ụka.
Ọ bụ ya ka anyị ga-eji kpegara ya juo maka nchebe n’oge ihe siri ike ma anyị onwe anyị ma ọ bụ maka ezinụlọ anyị dum.
Ọnọdụ ndị ahụ nile na-ewetara anyị enweghị mgbagha, a ga-ahapụ ya ka ọnụnọ ya ka o wee nyere anyị aka.
Imechi ndi agbata obi ojo
Saint Ignatius nke Loyola, onye ezi ntụkwasị obi nke okwukwe Katọlik, onye chebere ya pụọ ​​n'okwu aghụghọ, pụọ na ndapụ n'ezi ofufe na omume ihu abụọ, nke e guzobere n'okpukpe Katọlik, a na m arịọ gị arịrịọ maka m, ebe gị na ndị na-eso ụzọ Jesuit kwesịrị ntụkwasị obi tụgharịrị. onye kwalitere mbibi ha n’elu ụka, a na m arịọ gị, wepụ m ndị ọjọọ na mpụ, chụpụ ndị agbata obi ọjọọ, wepụ ndị iro m n'ụzọ m, Saint Ignatius nke Loyola, nsọ nsọ nke Jizọs Kraịst, maka ịdị mma gị na M na-edo onwe m n'okpuru. Amen.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchụpụ ndị agbata obi ọjọọ, ikwesiri ikpegara Saint Ignatius nke Loyola.
Ndị agbata obi, ọtụtụ oge, na-aghọ ezinụlọ anyị ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ ha bụ ndị kacha dịrị anyị nso.
Ihe a nwere ike ịbụ ezigbo ihe, n’ihi na inwe onye nọ gị nso adịghị ebe ahụ, mana mgbe ha bụ ndị agbata obi ọjọọ, ihe niile na-agbagha. Ha bụ ndị ahụ na-aghọ ndị iro anyị ma bụrụ ndị na-eme ka ndụ anyị ghara ikwe omume mgbe niile.
Kpee ekpere, nke ahụ kwesịrị ịbụ naanị mgbachitere anyị ọbụlagodi n'ọnọdụ ndị ahụ anyị amaghị nke ọma ihe anyị ga-eme.
San Ignacio de Loyola you nwere ike inyere anyị aka zere ndị agbata obi ọjọọ ahụ ndị bịara ịgbanwe ọnọdụ nke ndụ anyị na nke ndị niile gbara anyị gburugburu.
Mmetụta ọjọọ na-ejupụta obodo dum na ike adịghị mma nke anyị ga-ahapụ tupu ha emee ihe ndị ọzọ na emebi gburugburu.
Anyị aghaghị gwa ha ka ha pụọ ​​n’enweghị ihe mmerụ ọ bụla, n’agaghị ahapụ mmetụta ha ma wepụ ume na-adịghị mma, ekpere siri ike nke ga-enyere anyị aka oge niile.
Nwere ike ma ekwesịrị.
Ikwesiri inwe okwukwe n’obi gi. Okwukwe ga-eme ka ha niile rụọ ọrụ.
Anyi aghaghi ekwenye n'ike nke St. Ignatius nke Loyola ekpere igbochi ndi mmadu na ndi iro.
Ya mere, ị ga - ejide n'aka na ị ga - enweta enyemaka Chineke mgbe niile.